Runhare:+86 189 7131 9622
High speed yakananga madziro inkjet printer
CMYK inkjet printer yemadziro mural kudhinda mac...
Kunze kwemadziro art printer Robot Wall Printer Pri...
3D UV Mural inkjet Printing Machine Yakananga kune w...
High Speed ​​​​CMYK Plastic chivharo Online Industrial C...
High Speed ​​CMYK Mask Logo Rudzi UV inkjet printer
Ruoko rwakabata Thermal Inkjet Printer Coding Machine
TIJ Coding pen Inotakurika Mini Inkjet Printer Mac...
High Speed ​​​​3D UV Floor Printing Machine
Wuhan HAE Technology Co., Ltd. kubvira gore ra2008, vari vatungamiri venyika muInkjet Printing, kudhinda pamadziro uye kudhinda pasi.Iri ndiro madziro ekutanga epasirese uye ane hunyanzvi hwekudhinda madziro anogona kushandiswa kudhinda chero chinhu pane chero nzvimbo yakati sandara mumhando yepamusoro zvekuti maziso ako haazvitende.
huakehengrun Wheel type wall printer yakareruka & inopengeka kune tranporatioin, kushanda kuri nyore, yakagadzikana uye 2880dpi yakakwirira resolution kudhinda.
Kune CMYK mvura yakavakirwa ingi madziro printa uye CMYK + W UV ingi madziro ekudhinda muchina wesarudzo yekusangana nemutengi wekudhinda application chikumbiro.
Ndapota siyai kwatiri uye isu tichabatana mukati me24hours.
iva mubatsiri wedu
Iyo yakatetepa pasi rose UV inki otomatiki yakatwasuka ...
Isu tine ruzivo rwakapfuma rwekugadzira, yakanaka midziyo yekugadzirisa uye kugona kugadzira.
Uchishandisa yazvino yepamba yepamusoro yakangwara modular control system, yakasanganiswa neyepamberi machining michina kugadzira zvikamu, ita kuti michina yekufambisa ive yakarurama, kufamba kwakasimba, uye hupenyu hurefu hwebasa.
Zvino, zvikoro, mahotera, mashopu, mahotera, kindergartens, salons, nzvimbo dzekusimbisa muviri, uye madziro ekunze ezvimwe zvivakwa zvese zvinoda pendi yemadziro kuti inake.
Kufunga nezvezvinofungwa nevatengi uye zvavanoda, zvese kubva pakuona kwemutengi, kubva pakutsvagisa kusvika pakuitwa, kusangana nemaitiro ega ega, kuvandudza mhando yechigadzirwa, uye kuderedza mitengo yekugadzira.
Chikwata chekambani chakadzidza zvikuru cheR&D chinoona kuenderera mberi kwehunyanzvi uye kuita kwakadzikama kwezvigadzirwa zvekambani, zvichiita kuti zvigadzirwa zvekambani zvibude pachena mumakwikwi emusika.
Iyo kambani inosimbirira pakuva mutengi-centric uye musika-yakatarisana, kuitira kuti kambani igone kuchengetedza-kureba kunobudirira kukura.
Principle classification yeinkjet printers
1. Inoenderera mberi Inkjet Printer Pasi pekumanikidzwa kwepombi yekupa inki, inki inopfuura nepaipi yeinki kubva mutangi yeinki, inogadzirisa kudzvinyirira, viscosity, uye inopinda mupfuti yespray.Sezvo ...
Inkjet inodhinda musoro kugadzirisa uye kugadzirisa
Sechinhu chakakosha cheinkjet printer, musoro wekudhinda wakakosha.Musoro wekudhinda unokosha zvikuru, uye zvichava zvinorwadza zvikuru kushandisa kwenguva yakareba.Kuti t...
Beijing Kambani Yefekitari Kero: 101A, Chivakwa 11, Chivanze 3, Gaolizhang Road, Haidian District, Beijing
Overseas Sales uye Middle China Sales Office:
Iyo kambani Wuhan HAE Technology Co., Ltd.
Iyo 6 pasi, 2A chivakwa, Optics Valley Science uye Technology Port, Guanshan Road, Optics Valley, Wuhan, China
runhare mbozha:+86 27 8750 8600
Inkjet printer inobatwa neruoko